Kutheni singasokuze sikwenze oko ukuSasaza iiNkonzo zokuSasaza ngokuSasaza | Martech Zone
Omnye wabathengi bethu usothusile namhlanje, basazisa ukuba babhalisela i UkuSasazwa koKhuphelo Inkonzo ecetyiswa lelinye lamaqabane abo apho banokuhambisa khona ukukhutshwa kwabo kumaphepha e-500 ahlukeneyo. Ndikhawuleze ndancwina… nasi isizathu:
Iinkonzo zokuhanjiswa kweendaba musa ukubeka inqanaba Umxholo owukhuthazayo konke konke, ngaphandle kokuba umntu umamele ngokuzimisela ukukhutshwa kweendaba ezithile, bahlala bengafunyanwa kwiziphumo zokukhangela.
Iinkonzo zokuhanjiswa kweendaba zigqithisiwe, ivelaphi iinkampani. Ikhonkco elisisiphumo lihlala lifuna ukungavunyelwa kwii-Webmasters ukunciphisa umngcipheko wokulimaza iziphumo zakho zenjini yokukhangela.
Iinkonzo zokuSasaza iiNdaba zezi ngasebenzi. Ukugqibela kwethu ukuzisebenzisa ngekhe sibone ukuba akukho ndlela kwaye akukho mpembelelo kubakhenkethi, ukukhangela, okanye nasiphi na isibonelelo.
Ukuba kuvakala kulula kakhulu, kungenxa yokuba kunjalo. Kwaye ayisiyonto ilula kakhulu, ukuchitha imali encinci namhlanje kunokubangela amawaka eedola ngexesha olichithe kamva ukuphanda kunye nokuhambisa amakhonkco.
UkuKhutshwa koKhuseleko kuKhuseleko loSasazo
Ukuba ufuna ngenene ukufika phambi kwabaphulaphuli abafanelekileyo kwiindawo ezifanelekileyo, eyona nkqubo ilungileyo kukuba uphuhlise uluhlu lweendawo ekujoliswe kuzo apho umxholo wakho ubaluleke kakhulu kwaye iisayithi zigunyazisiwe kwi-Intanethi. Indlela entle yokujonga ukubaluleka kukudweliswa kweinjini yokukhangela ezikhoyo usebenzisa isixhobo esinjenge Semrush okanye ukuthandwa ngokusebenzisa indawo enje Buzzsumo.
Ukuba ungachonga iisayithi ezingama-25 ukuya kwezingama-50 ezinegunya nezaziwayo kwisihloko, ngoku unokwenza ukumba kwaye uchonge indlela onxibelelana ngayo nomnini ndawo. Amaqonga afana gqibo bonelela inkampani eneendlela zokujolisa kunye nabaphembeleli bomyalezo abavela kwezo ndawo. Iinkqubo zabo zikwabonelela ngeendlela zokuzenzekelayo kwizicelo eziphindaphindwayo, ukunika ingxelo ngempembelelo yokunxibelelana noluntu, kunye nokuvumela ingxelo okanye ukuphuma kwintatheli ekujoliswe kuyo okanye umphembeleli.
Chitha ixesha uvelisa isandi esikhulu. Funda iiposti ezimbalwa kwiziko leempembelelo ukuze uzive ukuba loluphi uhlobo lokubhala abalwenzayo kunye noluphi ulwazi abanokulufuna. Emva koko yenza umyalezo kubo ubazisa ngeendaba zakho, yeyiphi i-engile enokuthi inikwe kwisiza, kwaye unikezele ngazo naziphi na ezinye iiasethi ezinjengemifanekiso okanye iividiyo ukuze loo mphembeleli akwazi ukudibanisa inqaku ngokulula.
Ngalo mthengi, sinabo kumdlalo obalulekileyo kumabonwakude kwingingqi, siye sabakhankanya kwimithombo yeendaba yesithili ngasinye, kwaye siye sathetha izihlandlo ezininzi kupapasho oluphambili kushishino. Impembelelo iyonke iyamangalisa kwaye indawo iyaqhubeka nokuma kakuhle kumagama aphambili afanelekileyo.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuhanjiswa, ngoku kufuneka sibeke iliso kwisiza se-backlinks ezimbi kuba asifuni ukuba i-organic search rankings ihlupheke ukuba iGoogle ikholelwa ukuba igaxekile iindawo zokuhambisa i-PR kwi-backlinks. Ke, ayisiyiyo kuphela ukuba usasazo alusebenzanga, lusibangela usizi olongezelelekileyo njengoko sijonga inqanaba lesiza kunye negunya le-injini yokukhangela.
tags: kukunikabuzzsumoulungelelwanisoprukuhanjiswaupapasho ndaba zekhampaniusasazo losasazosemrush
Yintoni iNkqubo yoLawulo lwekhontrakthi? Badume Kangakanani?
Ukuhluma kweNtlalontle: Yenza, Jonga kwangaphambili, kwaye ulawule iiBots zeNtetho yeNtlalo